Filtrer les éléments par date : mardi, 17 décembre 2019
mardi, 17 décembre 2019 22:57
Fandraisana mpampianatra mpiasam-panjakana: 8500 ireo « contrat » kirakiraina « ampahibemaso » ao amin’ny INFP Mahamasina
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, androany, tetsy amin’ny INFP Mahamasina ny « Guichet Unique » izay ikirakirana « ampahibemaso » ireo antontan-taratasy ho an’ireo voaray ho mpiasam-panjakana ka natrehin’ny rehetra teny anivon’ny Cisco tsirairay.
Miisa 8500 ireo « contrat » ho karakaraina amin’izany, ka 700 no vinavinaina ho vitaina mialoha ny Noely. Fiaraha-miasa eo amin’ny ministeran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, ny ministeran’ny Asam-panjakana ary ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa izy ity.
« Atao mangarahara, lavitry ny kolikoly, ary tsara tantana ny fanaovana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana, izay tafiditra tanteraka ao anatin’ny vinan’ny fitondram-panjakana », araka ny nambaran’ny minisitra Volahaingo Marie Thérese.
mardi, 17 décembre 2019 22:55
Vakinankaratra: Hanomboka ny fitsirihana ny kalitaon’ny ronono
Isan’ny sompitry ny ronono eto Madagaiskara ny faritra Vakinankaratra. Nifarana ny alakamisy 13 desambra teo ny fihofanana sy fanamafisam-pahalalana nataon'ireo vaomieram-paritra misahana ny fitsirihana ara-tekinika ny kalitaon'ny ronono eto Vakinankaratra rehefa naharitra telo andro.
Nomena ny mpiofana ny famantarana ny kalitaon-dronono amin'ny fitaovana avo lenta, teo ihany koa ny fikirakirana ireo fitaovana hanatanterahana ny fitsirihan-dronono, ary nofaranana tamin'ny fampiharana mivantana ka toerana vitsivitsy teto Antsirabe izay mikirakira ny ronono no nanaovana izany.
mardi, 17 décembre 2019 22:47
Ankatso – Ambohipo: Lasa sahan’ady androany
Nitohy ary nahery vaika ny hetsiky ny mpianatry ny oniversiten’Antananarivo androany, andro faharoa amin’ny « Herinandro maty ». Teo Ankatso, tohin’ny fanoherana ny tenimita navoakan’ny ministera mampahatsiahy ny diplaoma LMD fa ny « Licence » dia fiofanana telo taona aorian’ny bakalorea, miampy fiofanana ary ny fahazoana ny diplaoma dia « contrôle continu » na « examen final » na ny fitambaran’ireo roa ireo fa tsy misy « mémoire ».
mardi, 17 décembre 2019 19:01
Basketball – Africa League: GNBC (Madagasikara) 78 # 75 UNZA Pacers (Zambia)
Nibata fandresena ny GNBC (Gendarmerie Nationale Basket Club) nanoloana an’ny UNZA Pacers (Zambia), tamin’ny lalao voalohany amin’ny « Africa League » faritra atsinanan’i Afrika, lalao izay tanterahina any Kigali Rwanda.
mardi, 17 décembre 2019 18:49
Nandona olona dia nitsoaka: Voasambotra tany Fandriana ilay mpamily taxi-be
Voasambotry ny Polisy tao amin’ny toby fiantsonan’ny taksiborosy tany Fandriana, Amoron’i Mania, ilay mpamily fiara taxi-be zotra 150 nandona ka nahafaty vehivavy lehibe 68 taona tetsy Ankorondrano-Antananarivo ny 23 Oktobra 2019.
Nandositra avy hatrany ilay mpamily raha vao fantany fa maty ilay olona voadonany. Nanokatra fanadihadiana ny Polisy avy ao amin’ny BAC (Brigade des Accidents). Nisy ny nanome vaovao fa nitsoaka any Fandriana ilay mpamily. Nidina tany an-toerana ny Polisy ary nanao velam-pandrika ka voasambotra ilay mpamily.
mardi, 17 décembre 2019 18:43
Papa Fransoa: Mankalaza ny faha-83 taonany
Mitsingerina androany ny faha-83 taona nahaterahan’i Papa Ray Masina Fransoa sady Evekan'i Rôma-Italia. Nanamarika ity taona 2019 ity ny fitsidihana pastoraly nataony teto Madagasikara ny 6 ka katramin’ny 10 septambra 2019.
Jorge Mario Bergoglio no tena anarany, teraka ny 17 desambra 1936 tao Buenos Aires, Arzantina izy.
Izy no Papa, dimbin’i Piera, faha-266 eo amin’ny tantaran’ny finoana Katolika.